फ्रान्सबाट फर्किएकी कोरोना संक्रमित नेपाली युवतीको परिवारको कोरोना परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ ! – Khabarhouse
फ्रान्सबाट फर्किएकी कोरोना संक्रमित नेपाली युवतीको परिवारको कोरोना परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ !
Khabar house | १४ चैत्र २०७६, शुक्रबार १५:०५ | Comments
काठमाडौं: फ्रान्सबाट आएकी कोरोना भाइरस संक्रमित युवतीका परिवारको कोरोना परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको छ। परिवारका सदस्यहरूको कोरोना परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको टेकु अस्पतालले जनाएको छ। संक्रमित युवतीको भने अस्पतालको आइसोलेसनमै उपचार भइरहेको छ। उनको पनि दोस्रो परीक्षण गरेर नतिजा नेगेटिभ आएपछि मात्र डिस्चार्ज गर्ने अस्पतालको तयारी छ।
युवतीको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले जानकारी दिए। युवतीलाई डिस्चार्ज गरेको खबर आए पनि उनले युवती आइसोलेसनमै रहेको बताए। ‘मलाई पनि धेरै फोन आयो। तर उहाँलाई डिस्चार्ज गरेको छैन, उन ले भने। गत चैत ४ गते फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै काठमाडौं आएकी उनलाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो।
संक्रमण देखिएपछि उनलाई टेकु अस्पतालको आइसोलेसनमा राखियो भने परिवारका सदस्यलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको थियो। युवती नेपाल आए देखि नै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेकी थिइन् । विज्ञहरूले पनि पहिलो जोखिम परिवार रहेको भन्दै अरूमा सर्ने कम सम्भावना रहेको औंलाएका थिए। नेपालमा काेराना संक्रमितको संख्या ४ पुगिसकेको छ। यसअघि एक व्यक्ति डिस्चार्ज भइसकेकाका छन्।